Indlela yokwandisa uluhlu lwam intengiso kwi-Amazon ngokuthengisa ngokuthe ngqo?
Xa kuziwa ekusebenzeni ishishini eliphumelelayo lokuthumela ibhonasi kunoma yiyiphi iplani ye-ecommerce eyaziwayo, ukuba uluhlu lwemveliso olulungileyo luyona nto eyenza izibonelelo zakho zibekwe kwizinga lokukhangela kwamakhasimende ngaphaya kwalo. Uluhlu lwakho lwemveliso kwi-Amazon alukhutshwa kulo mgaqo. Kwaye ngaphantsi ndiza kukubonisa indlela yokusingatha ukulungiswa kwe-SEO ngokufanelekileyo ngesinyathelo esilula kunye nesiqendu sesinyathelo.
Igama eliphambili lokuPhando lweeMveliso kwi-Amazon
Ngaphambi kwayo nayiphi na enye into, masijongane nayo - njengokuba kunjalo kwimeko eqhelekileyo yokuphucula injini (SEO), ukulungiswa kwe-Amazon ukukhangela kwemveliso iqala ngokuqhuba uphando oluphambili lwegama elingundoqo. Kwaye ndincoma apha ukuba ne-kickstart kunye ne-Google Keyword Planner Tool. Ngaloo ndlela, uza kubona umfanekiso omkhulu wecandelo lakho lemveliso okanye i-market niche, kunye nemigqaliselo ephambili yokukhangela kunye nemigca emide yemilenze esetyenziswe ngabathengi abaphilayo kuphela kwi-Amazon kodwa mhlawumbi wonk 'ubani okhangela i-Google search engine kwihlabathi lonke . Okulandelayo kuza ukukhethwa kwegama elingundoqo kwi-SEO e-Amazon. Ndincoma ukusebenzisa apha enye yezinto ezilandelayo zophando ngegama elingundoqo kunye nezixhobo zesikhokelo sokucinga, njenge-AMZ Tracker, ububanzi, amagama omthengisi okanye iScientific Seller. Zive ukhululekile ukuba ukhethe naziphi na ezi zikhethiweyo ezikhankanywe ngasentla, njengoko zonke izixhobo zinomsebenzi onomlinganiselo ofanelekileyo wokuncedisa ngegama elikhethiweyo elikhethiweyo.
I-Basic SEO Ukulungiswa kweeNcwadi zakho kwi-Amazon
Nantsi indlela ongakwenza ngayo ngokukhawuleza ukwandisa uluhlu lwakho lwemveliso ukuhlangabezana nomnqophiso wakho oyisiseko-ukufumana uvelele kwi-Amazon ngokwemigangatho ethengiswa ngamagama abalulekileyo. Kwaye kufuneka ugxininise kakhulu kula macandelo asemqoka okuluhlu lwakho: Isihloko somkhiqizo, uludwe lweeNqaku zeBlue, kunye ne-Item Inkcazo. Ngezantsi ndiza kuba nencazelo emfutshane nganye.
Isihloko esiphezulu soluhlu lwemveliso yakho kwi-Amazon yilapho ekujoliswe khona ukubeka amanqaku athile ekujoliswe kuwo kunye nokusetyenziswa kwamagama asetshenziswe rhoqo. Qaphela, nangona kunjalo, akufanele unganqamle ukuba unamagama amaninzi amaninzi agxothwe ngaphaya kwawo. Ewe, ukuba awufuni ukuba izenzo zakho zithathwe njenge-spammy okanye imizamo enokubakho inokuthi ibenokusebenza kwisimo sengqondo (imeko enzima kakhulu)..Ngoko, khawuqwalasele ezi ziphakamiso ezilandelayo ukuze ufumane isihloko sakho semveliso SEO-esilungisiwe ngendlela engcono kakhulu:
Izihloko zinconywa ukuba zihlale zingaphantsi kwama-200 kwaye zingabikho abalinganiswa.
Yonke incwadi yokuqala yegama ngalinye letayitile kufuneka ifakwe kwinqanaba.
Kuphela amanani abhaliweyo ngamanani avunyelwe izihloko zeemveliso (isb, ezisibhozo kunye no-8).
Ungafaki ubungakanani bempahla okanye umbala, okwenyani, ukuba akuyena umhlaba ochaphazelekayo.
Iimpawu zeBullet zento kufuneka zihlambuluke kwaye zicaca ngangokunokwenzeka.
Ichaza iimpawu ezizodwa zemveliso kunye nezinto eziqhelekileyo zokusetyenziswa kwansuku zonke.
Ugxininisa iimpawu eziphambili kunye neenzuzo zento.
Yonke into ejoliswe ukuba iboniswe kwibhokisi.
Yonke ingcaciso ebalulekileyo malunga nomveliso kufuneka ikhutshwe ngaphandle kokungabikho.
Iingongoma eziphambili zentlungu zabathengi maziqwalaselwe ngokupheleleyo.
Inkcazelo yomkhiqizo inconywa ukuba ilungiswe kakuhle kwii-key-tail keywords, kunye nezicelo zeemveliso ze-LSI zezimo ezihambelana nomxholo wento okanye i-niche.
Ukubhala ngokubhaliweyo okubhaliweyo kunye neyokuqala ngokubhaliweyo malunga neempawu ezibaluleke kakhulu zomkhiqizo.